PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - ZOWAKHA MBATHA
kakulula ukuthatha umuntu osika nganxanye njengomzothule. Namhlanje ngikubona kahle ukubaluleka kokukwazi ukwenza izinto ezahlukene emsakazweni nakuba kusiza futhi ukwaziwa lapho unamandla amakhulu ngakhona.
Kunabasakazi abakwazi ukwenza cishe zonke izinhlobo zezinhlelo ababanjiswa zona kanti ungizwe ubumuzwa noma ebiza amagama abaculi uma kwenzekile wasakaza olunye uhlelo ukuthi ubethwele kanzima. Isifundo engicabanga ukuthi kumele nabasakazi abasafufusa basithathe la ngesokubaluleka kokukwazi ukwenza izinto ezahlukene emsakazweni.
Ngiyazwelana kakhulu nokwehlele umchunu futhi simfisela inhlanhla kukho konke afisa ukukwenza.
Singayithokozela kakhulu neyakho imibono ngakho konke okuthinta ezemisakazo kule email engezansi nasezinkundleni zokuxhumana okutholakala kuzo umbhali. Instagram: @zowakha Facebook: Zowakha Mbatha Twitter: @Zowakha zowakha@ilanganews.co.za